कर्णालीको दिगो विकास लक्ष्य तथ्याङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक – Sitalpati
सुर्खेत ९,असोज ।
कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यहरुको आधार तथ्याङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रि महेन्द्रवहादुर शाही ,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षप्रा.डा. पुष्पराज कडेल र सयूंक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपालका आवासीय प्रतिनिधि आयसानीलाबेले सयूक्त रुपमा भर्चुवल कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
भर्चुवल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रि महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णालीको समस्या तथ्याङ्कमा रहेको र त्यस अनुसार पुर्वाधार,उर्जा,वस्ती विकास, सिचाइ, खानेपानीमा कर्णाली सरकार केन्द्रित हुनुपरेको वताउनुभयो ।
कोभिड १९ ( कोरोनाभाइरस ) काकारण हाल स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएको र आउदा दिनहरुमा शिक्षा ,स्वास्थ्य,रोजगारी र त्यसका लागि पुर्बाधारमा केन्द्रित हुने मुख्यमन्त्रि शाहीले वताउनुभयो ।
कार्यक्रममाराष्ट्रिय योजनाआयोगकाउपाध्यक्षप्रा.डा. पुष्पराज कडेलले दिगो विकास तथ्याङ्क सार्वजनिकगर्ने कर्णाली तेस्रो प्रदेश भएकोवताउदै यस्तो कार्य स्थानीयतहहरुमापनिगर्नुपर्नेमाजोड दिनुभयो । उपाध्यक्षप्रा.डा. कडेलले कर्णालीको यो प्रतिवेदनले कुन पक्षलाई जोडदिनु पर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको वताउनुभयो ।
कर्णाली विशेषको सन्दर्भ,मापनको आधार र दिगो विकास लक्ष्यका विशेषताहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको कर्णालीप्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षप्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष रेग्मीका अनुसार प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा दिगो विकासका लक्ष्य सुचांङ्कको आधार, तथ्याङ्कक अवस्था,तथ्याङ्कको उपलब्धता, कार्यान्वयन र नितिगतदिशा सम्बन्धी विषयहरु रहेका छन ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकायाले दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकरण र स्थानीयकरण गर्ने प्रदेश योजना आयोगको योजना रहेको वताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा पहिचान, सयन्त्रलगानी र सस्थाहरु कस्ता छन भन्नेवारे अध्ययन गरिएको छ । युएनडिपिको सहयोगमाप्रतिवेदनको अध्ययन तथा प्रकाशित गरिएको हो ।